Indlu yamaplanga etofotofo, kufuphi nechibi. Ilala abantu abayi-5 - I-Airbnb
Indlu yamaplanga etofotofo, kufuphi nechibi. Ilala abantu abayi-5
Wamkelekile eWinnipeg Beach! Iholide yakho isecaleni kwechibi lendlela enkulu kwindlela yakho yamaplanga engalaliyo. Indlu yamaplanga ikwiiblokho ukusuka eProspect uhamba ngeenyawo ukuya kwiMarina, iPaki Yephondo, ulwandle kunye neevenkile zasedolophini kunye neendawo zokuhamba ngeenyawo. Kukho iibhayisekile ezimbalwa ezifumanekayo onokuzisebenzisa kunye nenqwelo ye-Little Tykes ukukunceda xa ufuna.
Indlu yethu inembonakalo entle yamaplanga. Bukela ihlabathi lidlula njengoko uphumle kumgangatho ongaphambili okanye mhlawumbi ubukele isidlo sangokuhlwa sipheka ngokuthe ngcembe njengoko usenza inyama eyojiweyo kumgangatho ongasemva. Igumbi losapho elikhanyayo nelivulekileyo lilungele iimuvi zangokuhlwa. Ukutya ekhitshini kulungiselelwe ukupheka kakhulu nakuphi na ukutya kwaye kunomatshini wokuhlamba izitya. Ngoxa lidweliswe njengamagumbi amabini okulala, igumbi lokutyela lineskrini sabucala kwaye lilungiswe nge-futon eyenza indlu ilale kakuhle abantu abayi-5. Le ndawo yeholide ineenkuni zokubasa umlilo onokutyelela kuzo, iindawo ezininzi zokuhlala phandle, izitulo zaselwandle, iibhayisekile ezimbalwa, kunye nezinto zokudlala zesanti zokuzonwabisa ngaselunxwemeni.
Ngaphakathi uza konwabela iimuvi ezininzi, kunye nemidlalo kunye neencwadi. Ndiyazi ukuba uza kuvuyiswa zizinto ezongezelelekileyo esizifumanayo nokubuka iindwendwe! Zivise kamnandi uze ubhukishe namhlanje!
Intsha ngo-2022! Indawo yomlilo yegesi ifakiwe ukuze kubekho ingokuhlwa epholileyo. Kwakhona sitshintshe itephu yasekhitshini. Ndiyichaza le nto kuphela kuba ukuba ubukhe wahlala nathi kwixesha elidlulileyo uyazi ukuba itephu ibiyindawo efudumeleyo.
Iholide yakho isecaleni kwechibi lendlela enkulu kwindlela yakho yamaplanga engalaliyo. Indlu yamaplanga ikwiiblokho ukusuka eProspect uhamba ngeenyawo ukuya kwiMarina, iPaki Yephondo, ulwandle kunye neevenkile zasedolophini kunye neendawo zokuhamba ngeenyawo. Kukho iibhayisekile ezimbalwa ezifumanekayo onokuzisebenzisa kunye nenqwelo ye-Little Tykes ukukunceda xa ufuna.
Ndihlala kwiyure eyi-1 ukusuka eWinnipeg Beach kwaye ndidla ngokuhlala kule ndawo. Zive ukhululekile ukundibeka emgceni nangayiphi na imibuzo!